Iphrofayili ye-XIKOO | XIKOO Industrial Co., Ltd.
Ngokusebenzisa imikhiqizo emisha engaphezu kwengu-13years yokuthuthukisa namamodeli amadala okuthuthuka, kunezinhlobo ezingaphezu kuka-20 zamamodeli wohlelo lokusebenza oluhlukile. Imikhiqizo eyinhloko ye-XIKOO ifaka umoya opholile opholile, opholile womoya wezimboni, opholile womoya wewindi, opholile womoya we-centrifugal, opholile womoya we-DC kanye nezingxenye ezipholile zomoya. esetshenziselwa kabanzi ikhaya, ihhovisi, izitolo, isibhedlela, iziteshi, itende, abamba ukushisa, indawo yokudlela, indawo yokusebenzela, indawo yokugcina izinto nezinye izindawo.
I-XIKOO inokulawulwa okuqinile kwekhwalithi yomkhiqizo nokuhlolwa kwinqubo ngayinye yokukhiqiza.Kusuka ekukhetheni kwezinto ezibonakalayo, ukwakha ubuchwepheshe, ukukhiqiza, iphakethe nokuhlolwa. I-cooler yomoya ivunyelwe yi-CE, SASO, ROHS, IEC njll. Futhi umkhiqizo wethu nawo waziwa ngamakhasimende ethu, amakhasimende ethu ajwayelekile agcina ukubambisana kweminyaka eminingi nathi.
Inethiwekhi yokuthengisa yasekhaya iXIKOO ihlanganisa izifundazwe ezingama-21 kanye nezifunda ezingama-86 ezithuthukile, ezingabasabalalisi abangaphezu kuka-112 ezweni lonke. Futhi imikhiqizo ithengiselwa amazwe naphesheya kwezilwandle angama-35. Thuthukisa ikakhulukazi amakhasimende wokubambisana isikhathi eside e-Saudi Arabia, Kuwait, Mali, Morocco, Sudan, Vietnam, Malaysia, Thailand, USA, Brazil, Germany, Australia nakwamanye amazwe.
I-XIKOO Gcina icwaninga nokwenza izinto ezintsha, iwine ibhizinisi eliphakeme lobuchwepheshe, umkhiqizo ophezulu wobuchwepheshe nezinye izihlonipho. Kutholakale i-patent eminingi yokuklama, i-patent yokusungula ne-patent esebenzayo. I-air cooler fan ukusetshenziswa okuphansi kanye nemikhiqizo enobungane bemvelo, i-XIKOO iphinde yathuthukisa umthombo omusha wamandla welanga DC opholisayo womoya opholile. sithemba ukufaka isandla ekusindiseni kwethu amandla emhlabeni nokwakhiwa kwemvelo okunobungane nge-XIKOO air cooler promotion and application.
I-XKIOO itshale imali eningi futhi isebenza ekuthuthukiseni imikhiqizo emisha eminyakeni yamuva. Ngokuzayo, sizoletha imikhiqizo emisha eminingi kumakhasimende ethu, Siyakwamukela ukubambisana neXIKOO, Wemukele umbono wakho omuhle futhi uthuthukise imikhiqizo emisha ngeXIKOO.